Ugence umkakhe 'nesoka' - Ilanga News
Home Izindaba Ugence umkakhe ‘nesoka’
Ugence umkakhe ‘nesoka’
Kuthiwa ungene nesicabha kwamakhelwane
UFELE kwamakhelwane owesifazane wasoThobothini, eJozini, ogecwe ngocelemba ngumyeni emuva kokumfica “neshende” ngoMgqibelo ebusuku waqeda lapho wazinikela emaphoyiseni.
Umsolwa okulindeleke ukuba avele eNkantolo yeMantshi yasoBonjeni, uhlasele emzini kamakhelwane wakhe wafica ingoduso yakhe, uNkz Thembi Nyawo, ihleli nomakhelwane nokuthiwa ubeyisoka layo elisha.
Ngokusho kukaNkz Philisiwe Nkomonde ongumngani kamufi, uthi ubenolwazi lokuthi umngani wakhe unobudlelwano nomunye wesilisa ngaphandle kwendoda yakhe eyamlobola.
Uthi kufike umngani wakhe ezomnakekela njengoba yena engaphilile kahle, okuthe ngokuhamba kwesikhathi kwafika isoka lakhe lacela ukuchatha umakhalekhukhwuni.
“Ngisanda kufika lapha endaweni, umufi bengijwayelene naye, ubengixoxela zonke izindaba zakhe okuhlanganisa nokuthi akasezwani nomyeni wakhe wezinkomo anezingane eziwu-6 naye.
“Umyeni ubeke wafika lapha kwami, wangicela ukuba ngimkhulumele noMaNyawo ukuba amxolele kuwona wonke amaphutha awenze ngaphambilini, kodwa umngani wami wenqaba. Ufike lapha kwami wathi uzongibheka njengoba nginomkhuhlane,” kusho uNkz Nkomonde.
Uthi kuthe besahleli, kwafika ishende lika-Nkz Nyawo, okungowesilisa ajwayele ukumbona endaweni.
“Ufike wacela ukuchatha umakhalekhukhwini. Kuthe kusenjalo, kwafika umyeni wakhe umngani abengitshele ukuthi bahlukene ezinkundleni zokuxhumana naye engadle nkobe zamuntu, wangabuza lutho wangena nesicabha, wamgenca ngocelemba. Ugence isoka likamngani wami, kwathi uma ngizama ukukhuza wangigenca ekhanda nasesandleni. Sesingeniswe esibhedlela, ishende lingitshele ukuthi belingazi ukuthi indoda ibona konke okwenzekayo ocingweni lwengoduso yayo,” kusho uNkz Nkomonde.
UNkk Funekile Menyuka, oyilungu lomndeni kamsolwa, uthe kubaphathe kabi akwenzile ngoba kalikho iphutha elilungiswa ngokuthi kuphume umphefumulo.
“Besilungiselela ukulala ngesikhathi kungena izingcingo zisitshela ukuthi u…. usebulale umkakhe. Sidumele ngokwenzekile,” kusho uNkk Menyuka.
Induna yendawo, uMnu Juluka Menyuka, ithe ibingakayi emzini okwenzeke kuwona isigameko kodwa izwile ngokwenzekile futhi akulungile ngoba kuhlukumeza abantu abaningi.
“Kalikho iphutha elilungiswa ngokuthi kubulawe umuntu, noma ngabe indoda idinwe kangakanani, akufanele ibulale ngoba izethwesa icala elingenasidingo,” kusho uMnu Menyuka.
Imizamo yokuthola umndeni kamufi iphunzile. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, akatholakalanga kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela.
Previous articleUSuthu lubambane neziNyoni
Next articleKume ukukhonza bebhikisha